Exam Results 2019 Public Announcement
၁။ ၂၀၁၉ - ခုနှစ် ၊ မတ်လအတွင်းက ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကို (၈ - ၆ - ၂၀၁၉) ရက် ၊ စနေနေ့ နံနက် ( ၀၆:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။
- စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၂) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊
- လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊
Read more about Exam Results 2019 Public Announcement
MyanNet E-Commerce Solution - Demo
ကျွန်တော်တို့ MyanNet team နဲ့ အတူတွဲလုပ်နေတဲ့ ပါတနာတွေ၊ အလားအလာရှိတဲ့ Customer တွေက E-Commerce အကြောင်းမေးလာရင် Feature အစုံအလင်ပါတဲ့ တကယ့် E-Commerce website တစ်ခုကို နမူနာအနေနဲ့ ပြစရာ မရှိဘူး။
Customer တွေရဲ့ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ website တွေကိုလည်း မညွှန်းချင်တာက တစ်ပိုင်း၊ MyanNet ရဲ့ Team member အားလုံးအတွက်လည်း လေ့လာစရာ နေရာတစ်ခု ရှိစေချင်တာက တစ်ပိုင်းကြောင့် အွန်လိုင်းမှာ E-Commerce Solution - Demo ဆိုက်တစ်ခု လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Website - http://ecommerce.myannet.com/
Read more about MyanNet E-Commerce Solution - Demo
Read more about Drupal 8 Training & Development
အကြံကောင်း၊ နားလည်နိုင်မှုနှင့် Key Player များ
တချို့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေက လူတိုင်းကို ချပြလို့ မရဘူး
တကယ်လုပ်နိုင်မယ် ထင်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်ပြောတာကို နားလည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိသူတွေကိုပဲ ချပြတာ ကောင်းတယ်
Read more about အကြံကောင်း၊ နားလည်နိုင်မှုနှင့် Key Player များ
Read more about အိုင်တီသမား နဲ့ ဆား
အလုပ်အကိုင်၊ ဘဝလမ်းခရီး အပြောင်းအလဲ - Career Change, Life Change
ဒီလထဲမှာ အလုပ်အကိုင်၊ ဘဝလမ်းခရီး အပြောင်းအလဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကူအညီ ၂ ခုပေးဖို့ ကြုံရတယ်။
ပထမတစ်ခုက အတူလုပ်နေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက် - လက်ရှိအလုပ်ကနေ ပရိုဂရမ်မာအလုပ်ကို ပြောင်းချင်တာ။
အသက်က ၂၀ ကျော်လောက်ပဲ ရှိသေးတဲ့အတွက် အချိန်ကောင်းကောင်းရလို့ ၂ နှစ်လောက် အချိန်ယူဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောရင်း လိုအပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို စလုပ်ပေးလိုက်တယ်။
သူ့ရဲ့တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုကို ၂ ပတ်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြီး စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
Read more about အလုပ်အကိုင်၊ ဘဝလမ်းခရီး အပြောင်းအလဲ - Career Change, Life Change
အလုပ်တွေလုပ်ရင်း၊ သင်တန်းတွေလည်း တက်ရင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ IT နဲ့ တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတော်များများမှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေသေးတာ သိလာရတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ မလိုအပ်ဘဲ အဆင့်တွေများနေတာ၊ အချိန်တွေ မကုန်သင့်ဘဲကုန်နေတာ၊ အိုင်တီအကူအညီနဲ့ ဖြေရှင်းပေးလို့ရတာတွေ ရှိနေလျက်နဲ့ အသုံးမချနိုင်သေးတာ၊ တနည်းအားဖြင့် Lean, Aglie မဖြစ်တာတွေ မြင်လာရတယ်။
Read more about Lean HR, Agile HR
Our Solutions to City Mall Online. Since 2017.
AWS Infrastructure - Design & Implementation
Consultation on CDN, S3 Integration with Magento
Planning for System Architecture and Launching
24/7 Monitoring, Support and Consultations
Read more about City Mall Online
Email Services by MyanNet
Email with custom domain name, isavery important feature for organizations and companies.
For example, email account like ceo@YourCompanyName.com is so much better and impressive than usingafree email like YourCompanyName@gmail.com. To solve this problem, MyanNet is introducing Email Service to our customers.
Read more about Email Services by MyanNet
No Contract is Better Contract
Why No Contract...?
We don't want to lock our customers with us by contracting "XX number of months/years". So that, our customers have the right to leave MyanNet anytime if they are unhappy with our Solutions, Services and Support.
Read more about No Contract is Better Contract
Project R18 - Visitors Statistics
၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ၊ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းကို (၂ - ၆ - ၂၀၁၈) ရက် ၊ စနေနေ့ နံနက် ( ၀၆:၀၀) နာရီ အချိန်မှာ အွန်လိုင်းက ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခင် ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ နှစ်များက မကြုံခဲ့ရပေမယ့်၊ ယခုနှစ်မှာ အချို့သူများအတွက် အောင်စာရင်းထွက်တဲ့ မနက် ၆ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကြည့်တဲ့အခါ myanmarexam.org ဆိုပြီး www မပါဘဲ ကြည့်တဲ့ အခါ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့တာကို ဒီနေရာကနေ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ www.myanmarexam.org ကနေ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူများအနေနဲ့ ဒီပြဿနာကို ကြုံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောင်နှစ်များမှာ ဒီလို ပြဿနာမျိုး မဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားမှာပါ။
Read more about Project R18 - Visitors Statistics
Project R18 - Exam Results 2018
တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ၊ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းကို အွန်လိုင်းက ထုတ်ပေးတဲ့ ပရောဂျက်ဟာ MyanNet team အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုပါ။
MyanNet team အနေနဲ့ ၂၀၁၆ ဆယ်တန်း အောင်စာရင်း၊ ၂၀၁၇ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း တွေကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန နဲ့အတူ အွန်လိုင်းကတဆင့် အောင်မြင်စွာ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ၂၀၁၈ အတွက်လည်း အစစ၊ အရာရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about Project R18 - Exam Results 2018
Read more about Elastic Infra Service
Myanmar Exam Results
Our Solutions to Myanmar Exam Results. Since 2016.
Customized Cloud Solution on AWS to handle thousands of concurrent users
CDN, S3 Integration with Drupal
Read more about Myanmar Exam Results
MRTV4 Online Media Platform
Our Solutions to MRTV4. Since 2014.
CDN, S3 Integration
Read more about MRTV4 Online Media Platform
iMyanmarHouse Real Estate Portal
Our Solutions to iMyanmarHouse. Since 2018.
Read more about iMyanmarHouse Real Estate Portal
Our Solutions to BEST DENKI Online Store. Since 2017.
Customized Cloud Solution on AWS
Multi-Servers Drupal Commerce
Drupal6Ubercart to Drupal7Commerce Migration
2C2P, Master/Visa Payment Gateway Integration Module
Performance Optimization, Cost Optimization
Read more about BEST DENKI Online Store
Rgo47 Mobile Apps
Our Solutions to Rgo47 Mobile Apps. Since 2016.
Read more about Rgo47 Mobile Apps
Our Solutions to PyonePlay Application. Since 2016.
Read more about Pyone Play